Kôlà sôkôla, crème ary voanjo | Bezzia
Raha nilaza taminao aho fa afaka manao an'ity tsindrin-tsakafo ity ao anatin'ny 10 minitra, dia hino izany ve ianao? Ity kapoaka sôkôla, crème ary voanjo ity dia a safidy tsara indrindra rehefa misy vahiny ao an-trano. Azontsika atao ny mamela ny fotony sôkôla vitaina ary manampy alohan'ny hanompoana ireo ambin-tsakafo.
Ohatrinona no vidinao amin'ny fanomanana ireto solomaso ireto? Manodidina ny 10 minitra. Avy eo, avelao fotsiny izy ireo hangatsiaka amin'ny hafanan'ny efitrano na tazomy ao anaty vata fampangatsiahana izy ireo raha tsy hihinana azy ireo ianao amin'io andro io ihany. Ny mousse sôkôla Malemy be izy io ary azo aroso irery, fa ny crème sy ny voanjo dia manampy amin'ny fanaovana boribory ity tsindrin-tsakafo ity.
Ny zavatra mahaliana amin'ny fanampiana voanjo amin'ity tsindrin-tsakafo ity dia ny mifanohitra masira ireo dia mandray anjara amin'ny tsindrin-tsakafo. Ary ny fikasihana mangatsiaka raha ny voanjo natsatsika izay ampiasaina ho tampony. Fa raha tsy anao ny voanjo dia aza misalasala manampy sôkôla, kakaô na kanelina vitsivitsy eo ambonin'ilay crème.
1 Akora ilaina amin'ny vera 1
Akora ilaina amin'ny vera 1
Ronono na amandy 200 ml
9 g. vovoka katsaka
Sotro 1 sotro
10 g. kakao madio
Ataovy ao anaty lovia ny singa efatra voalohany: zava-pisotro amandy, vovo-katsaka, siramamy ary kakaô. Avy eo, afangaro amin'ny tsorakazo vitsivitsy mandrapifangaro tsara ny fangaro rehetra.
Raiso amin'ny lozisialy ny vilia baolina ary manafana iray minitra amin'ny heriny lehibe indrindra. Esory avy eo ary afangaro amin'ny tsorakazo alohan'ny hamerenany azy ao anaty microwave. Avereno im-betsaka araka izay ilaina izao ny fandidiana amin'ny kapoka 30 segondra mandra-pahatongan'ny fifangaroana. Raha ny amiko dia 4 minitra ny fitambarany.
Raha vao mihalehibe aho araraka ao anaty vera ilay fangaro ary avela hangatsiaka amin'ny hafanan'ny efitrano.
Rehefa mangatsiaka ny mousse kakao, manaingo amin'ny crème whipped, dibera vitsivitsy an'ny dibera voanjo, kanelina ary voanjo natsatsika.
Ankafizo ny vera sôkôla, crème ary voanjo ho an'ny tsindrin-tsakafo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Postres » Kopy sôkôla, crème ary voanjo